बालुवाटार जग्गा प्रकरणः राजनीतिक प्रतिशाेध रहेकाे कांग्रेसकाे दाबी - Samadhan News
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः राजनीतिक प्रतिशाेध रहेकाे कांग्रेसकाे दाबी
समाधान संवाददाता २०७६ माघ २४ गते १२:५२
नेकपाका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको पछिलो निर्णय अत्यन्त पूर्वाग्रही रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । यो पूर्वाग्रही कदमको विरोधमा कांग्रेसले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपसभापति गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि पार्टीका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा कानुन व्यवसायी बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
सरकारले नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर गच्छदारमाथि प्रतिशोधपूर्ण कदम चालेको बैठकले ठहर गरेको छ । बैठकले अख्तियारको यो कदमविरुद्ध संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ । यो कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्न भातृसंस्था परिचालिन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
शुक्रबार कांग्रेसका भातृ संस्थाले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबारै बसेको कांग्रेस भातृसंस्थाको बैठकमा आन्दोलनका बारेमा छलफल भएपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा जाने निर्णय भएको हो । बैठकमा उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गच्छदार, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, बालकृष्ण खाँण, मीन विश्वकर्मा लगायतका नेता उपस्थित थिए । भातृसंस्थाका प्रमुखसँगको बैठकमा गच्छदारले सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रकरणमा आफू कुनै पनि रुपमा संलग्न नभएको बताएका थिए ।
भातृसंस्थाका प्रमुखहरुले सरकार अधिनायक ढंगबाट अघि बढेर सिंगो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न उद्यत भएको ठहर गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
पार्टी कार्यालयमा बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले केही जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर नगर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही ढंगले फसाउने काम भएको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर भए पनि गच्छदारले कानुनी र राजनीतिक रुपमा सामना गर्ने बताए । उनले विधि र प्रक्रिया मिचेर मुद्दा दायर भए पनि कांग्रेस विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्ने पार्टी भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । प्रवक्ता शर्माले यसलाई कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झुट्टा मुद्दा लगाउने र हतोत्साही बनाउने शृंखलाका रुपमा पार्टीले लिएको बताए ।
कांग्रेसले गच्छदारलाई पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालीन जेल र प्रवास भोग्दै आएर जनताबाट निरन्तर निर्वाचित नेताका रुपमा चित्रण गरेको छ । अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संसदमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस सरकारका मन्त्री गच्छदारविरुद्ध नै आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेसले आफ्ना संसदीय दलका उपनेता गच्छादारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै बिहीबार संघीय संसद अवरुद्ध गरेको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा फसाइएको भन्दै कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बैठकको सुरुमै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको लाचार छायाँ बनेको भन्दै विरोध जनाइन् । भुसालले भनिन्, ‘अख्यितार सरकारको लाचार छायाँ बनेको छ । अख्तियार वैचारिक प्रभावमा परेर अघि बढेको छ । कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ कांग्रेसका सांसदले उठेर सदन अवरोध गरेपछि बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।